မြန်မာအစိုးရရဲ့ ခွေးဘီလူး ၀ီရသူ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဒီမိုငပိန်းတွေကို ငပိန်းကွက်နဲ့ နှစ်ရက်ပဲ လှည့်ရတယ်။ ၀ှိုက်ကဒ်…၀ှိုက်ကဒ်… ဖြစ်သွားပြီ
မြန်မာအစိုးရရဲ့ ခွေးဘီလူး ၀ီရသူ
မြန်မာ့အကြမ်းဖက်သမား ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီး ၀ီရသူသည် တိုင်းပြည်အတွင်း ထိန်းချုပ်မရနိုင်သောသူဖြစ်သည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသော်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အခြားနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အတူ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသည်။
စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်လေ့လာသူ အများစုက မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဇောင်းကြွနေသူကို အစိုးရက အဘယ်ကြောင့် လွှတ်ပေးရသည့် အကြောင်းရင်းအား သိရှိထားကြသည်။ ၎င်းသည် ရိုဟင်ဂျာအပါအ၀င် လူနည်းစုမွတ်စလင်များအား လူမျိုးရေး သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်နှင့် မုန်းတီးရေးရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်နိုင်ရန်အတွက် လှုံ့ဆော်သူအဖြစ် အစိုးရ၏ ခွေးဘီလူး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။
၀ီရသူသည် အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ဆက်လက်ဟောပြောစည်းရုံးသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် ၎င်းမှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် မျက်နှာစာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအများစုလွှမ်းမိုးသော တိုင်းပြည်အနှံ့ရှိ လူနည်းစုမွတ်စလင်များအား ဆန့်ကျင်သည့် မုန်းတီးရေး ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် မျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု ကမ်ပိန်းများကို ၎င်း၏ ၉၆၉ ဖက်ဆစ်လှုပ်ရှားမှုက ဦးဆောင် ဖြန့်ချိသည်။ ထို့နောက် ရက်စက်ကြုမ်းကြုတ်စွာ အသုံးတော်ခံမှုကြောင့် များစွာသော မွတ်စလင်တို့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာမွတ်စလင်အများစုမှာ ယင်းမုန်းတီးမှုများနှင့် မသင့်မြတ်မှုများမှ လွတ်မြောက်ရန်အတွက်မူ အသက်အန္တရာယ်များလှသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက အထူးသဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ အခြေအနေများမှာ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်၏။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ ကော့ဘဇားခရိုင်ရှိ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း ကြောက်လန့်တကြားရှိနေပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းပြည်ရှိ မိမိတို့၏ မူလဌာနေကိုပင် ပြန်မသွားလိုကြချေ။
ယင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြမ်းဖက်ဝါဒက ၎င်း၏သားကောင်ကို မည်သို့ပြုမူခဲ့သလဲဆိုသည်ပင်။ လူနည်းစု မွတ်စလင်များ အား ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတွင် ၀ီရသူထောင်က ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ၎င်း၏ လက်ရာခြေရာများကို တွေ့မြင်ရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်များက ၀ီရသူသည် မိမိကိုယ်ကို မကောင်းဆိုးဝါး မာရ်နတ်တစ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ကုလအထူးကိုယ်စားလှယ် ရန်ဟီလီအား “ဖာသည်မ”“ကောင်မ”ဟူသော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် ဆဲရေးတိုင်းထွာခဲ့ခြင်းပင်။
မစ္စလီ၏ ပြစ်မှုက ဘာများပါလိမ့်။ မြန်မာနိုင်ငံကို ၁၀ရက်ကြာ လေ့လာရေးခရီးရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက် မစ္စလီက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ စနစ်တကျ ခွဲခြားဆက်ဆံခံနေရကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် သူမက ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးများ ပူးပေါင်းပါဝင်အဆိုပြုထားသည့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားခွင့်နှင့် ဘာသာကူးပြောင်းခွင့် ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတို့ပါဝင်သော ဥပဒေမူကြမ်းကို ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ကုလကိုယ်စားလှယ်ကို အများပြည်သူအရှေ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းမီဒီယာတို့က ဖော်ပြသည်။
“ကျုပ်တို့က မျိုးစောင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှင်းပြတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဟိုကောင်မက တစ်ခုမှမလေ့လာဘဲနဲ့ ဝေဖန်တယ်……. ကုလသမဂ္ဂထိုင်ခုံပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို လူကြီးလူကောင်းလို့ အောက်မေ့မနေနဲ့ ခင်ဗျားဟာ ကျုပ်တို့နိုင်ငံအတွက်တော့ ဖာသည်မ ပဲဗျ”ဟု ပရိသတ်ရှေ့တွင် ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
၎င်း၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားပြောဆိုမှုများအတွက် နိုင်ငံတကာက ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည့်တိုင်အောင် မြန်မာအစိုးရကမူ ၎င်း၏ ခွေးဘီလူး အယုတအနတ္တ ဘုန်းကြီး ၀ီရသူအား အဟောင်မပျက် အသံပေးထွက်စေခဲ့သည်။
စာရေးသူအဖို့ အံ့သြစရာမဟုတ်။ ၎င်းသည် မြန်မာအစိုးရ၏ ဆယ်စုနှစ်ချီ ပိတ်လှောင်ခံရသော မွတ်စလင်များအား လူမျိုးရေးသုတ်သင်ရှင်းလင်းရန်နှင့် အစိုးရ၏ ကစားပွဲအတွက် အသုံးတော်ခံရန် မွေးမြူခံရသော အစိုးရလူပင်ဖြစ်ကြောင်း သဲလွန်စရပြီးဖြစ်သည်။
လူ့အခွင့်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သော Fortify Rights ၏ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတွင် ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တို့အား ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှာ အစိုးရမူဝါဒဖြစ်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများကို ပြသထားသည်။ ယင်းမှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကြိုတင်ကြံစည်မှုပင်ဖြစ်သည်။ ပေါက်ကြားခဲ့သော လျှို့ဝှက်အထောက် အထားများအရ အစိုးရ၏ အမိန့်များက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အစိုးရ၏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ရေး မူဝါဒများကို အားဖြည့်ပေးနေ ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အထိ အစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက် အထောက်အထား ၁၂ ခုကို Fortify Rights အဖွဲ့က သုံးသပ်ရာတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တို့၏ အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကို ဟန့်တားပိတ်ပင်ရန် အစိုးရက မူဝါဒချမှတ်ထားကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ အဆိုပါ မူဝါဒတွင် ရိုဟင်ဂျာတို့၏ လှုပ်ရှားမှု၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှု၊ ကလေးမွေးဖွားခွင့်၊ အိုးအိမ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုနှင့် ၀တ်ပြုဆောင်များ ဆောက်လုပ်မှုတို့ကို ကန့်သတ်တားမြစ်ထားသည်။ ခွင်ပြုချက်မရဘဲ တစ်မြို့မှ တခြားမြို့များသို့ ခရီးသွားလာခွင့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ တခြားနေရာသို့ ထွက်ခွာခွင့်တို့ကို ပိတ်ပင်ထားကြောင်း အစီရင်ခံစာ ဖော်ပြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာတို့အတွက် လက်ထပ်ထိမ်းမြားရန် ခွင့်ပြုချက်ရယူရမည်ဖြစ်ပြီး ဇနီးမောင်နှံတို့အတွက် ကလေး ၂ ဦးထက် ပိုမယူရန် အစိုးရက စည်းကမ်းသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းထားကြောင်း အထောက်အထားများတွေ့ရှိရသည်။
Fortify Rights အဖွဲ့က အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်မှာ ၁နှစ်နီးပါးကြာပြီဖြစ်သော်လည်း မြန်မာအစိုးရ၏ ရာဇ၀တ်မှုများ၊ လူသတ်နှုန်းအဆင့်နှင့် ရိုဟင်ဂျာတို့အား မျိုးတုံးသုတ်သင်ရေးပေါ်လစီကို ပြောင်းလဲရန် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အသိုင်း အ၀ိုင်းကြားတွင် တရားစွဲဆိုခြင်းများပြုလုပ်ရန် တွန်းအားပေးမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ထွန်းခဲ့ခြင်းမရှိ။ ပြီးခဲ့အပတ်က ရိုဟင်ဂျာတို့အား နိုင်ငံသားအခွင့်ရေးပေးရန် မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းကြောင်း ကုလသမဂ္ဂက ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်လိုက်သည်။
မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ယင်းကိစ္စကို မလွှဲသာမရှောင်သာ လုပ်မည့်ပုံမပေါ်။ ၎င်း၏ ခွေးဘီလူးက မိမိတို့ အဖွဲ့ဝင်ထားသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းကိုပင် ဟောင်ဖွာဟောင်ဖွာ စော်ကားပြောဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကုလလူ့အခွင့်ရေးဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီး ဇိုက်ရအဒ်အလ်ဟူစိန်က မစ္စလီကို လူသိရှင်ကြားတိုက်ခိုက်မှုအပါအ၀င် မည်သည့် မုန်းတီးရေးလှုံ့ဆော်မှုမျိုးကိုမဆို ၀ိုင်းဝန်းရှုတ်ချကြရန် မြန်မာနိုင်ငံက ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များအား တိုက်တွန်းသွားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဘုန်းကြီးများမှာ သြဇာညောင်းသော နိုင်ငံရေးလော်ဘီများပင်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ရှိသဖြင့် မည်သည့်နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်မဆို ၀ီရသူအကြောင်း လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမိပါက ဖက်ဆစ်ဘုန်းကြီးများ၏ ၀ိုင်းဝန်မာန်မဲခြင်းကို ခံရနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း သံသရဖြစ်မိသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက မမျှော်လင့်ထားသည်တို့ကို မျှော်လင့်နေသော နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအဖို့ အရူးလုပ်ခံရဖွယ်ရှိသည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော အရေးယူမှုများပြုလုပ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့ မျိုးတုံးလာမှုကို ရပ်တန့်သင့်သည်။
စာရေးသူ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောခဲ့သလို သောင်းကျန်းနေသော မြည်းကို မုန်လာဥကျွေးပြီး မလှည့်စားပါနှင့်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အပယ်ခံ အစိုးရနှင့် ၎င်း၏ ခွေးဘီလူး ၀ီရသူတို့အတွက် ခါးသီးသော ပိတ်ဆို့ပြစ်ဒဏ်များကသာ အပိုးကျိုးစေနိုင်ပါမည်။ ၎င်းတို့ နာကျင်လာပါက ၎င်းတို့၏ နာကျင်မှုကို မည်သို့ ကုစားရမည်ကို သိလာလိမ့်မည်၊ မျှော်လင့်ချက်ကြီးစွာဖြင့် ၎င်းတို့၏ မကောင်းဆိုးဝါး အမူအကျင့်တို့ကို အကောင်းဘက်သို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာပါလိမ့်မည်။
Myanmar Muslim Media Ref : – Asian Tribune တွင်ဖော်ပြသော “Wirathu – the pit bull of Myanmar regime” ဆောင်းပါးကို စိုင်ဖုလ္လာဟ်(Myanmar Muslim Media)က ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
This entry was posted on February 5, 2015 at 10:32 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.